Kukhishwa Isilo kolwezigodlo zezigidi | Isolezwe
Kukhishwa Isilo kolwezigodlo zezigidi
Isolezwe / 10 September 2012, 10:40am /
UMQONDISI Jikelele wesifundazwe KwaZulu-Natal futhi ophethe uMnyango oqondene nezindaba zaseNdlunkulu uthe akuzange kube yisicelo seSilo uqobo ukuba kulungiswe izigodlo zaso ngo-R18 million kodwa leso kube yisiphakamiso soMnyango abasenze ekomitini elibhekene nezindaba zehhovisi likaNdunankulu nezaseNdlunkulu. Ukuphawula kukaMqondisi uMnuz Nhlanhla Ngidi kulandela intukukuthelo yeSilo ngale mibiko ebithi sifuna u-R18 million kuhulumeni wesifundazwe wokwakhela uNdlunkulu waso omncane, uZola Mafu isigodlo.
Emuva kwale mibiko Isilo siphonsele uNgidi inselelo sibuza ukuthi ngabe iqhamukaphi le mibiko.
Ngenxa yokushuba kwesimo Isilo sesize sajuba ithimba laseNdlunkulu eliholwa wuMntwana uMbonisi Zulu elizohlangana noNgidi ukuze aziphefumulele kulolu daba.
“Lo mbiko ngezigodlo zeSilo uphambene, Isilo asicelanga ukuba kulungiswe izigodlo,” kusho uNgidi.
Uthe njalo emuva kwekota baba nomhlangano nekomiti lasePhalamende lapho besuke bedingida khona izinto ezithinta isabelozimali benze nezincomo zezinto ezithile befuna nezeluleko.
UNgidi uthe kulo mhlangano nekomiti abazange bakhulume ngesigodlo esisodwa kodwa babekhuluma nangezinye njengesaseNyokeni esesiphenduke indawo ethandwa kakhulu yizivakashi futhi esisingatha nemikhosi eminingi yaseNdlunkulu. Uthe ayikho ingcindezi abebeyithola eSilweni futhi uyavumelana naso uma sithi asikho isigodlo seNdlunkulu kodwa kukhona izigodlo zesizwe.
Sikhuluma nabantwana emkhosini woMhlanga eNgwavuma esigodlweni sase- Machobeni ngoMgqibelo Isilo sathi sesanele wukungeniswa kweNdlunkulu ehlazweni ngabantu abahlulwa wukuphendula imibuzo.
NgoLwesibili olwedlule obhekele imali yoMnyango waseNdlunkulu, uMnuz Mduduzi Mthembu, uthe badinga u-R12 million wokuba kwakhiwe indlu entsha yesimanjemanje esigodlweni saseNyokeni. UMthembu uphinde wacela u-R6 million ozokhokhwa iminyaka emithathu okuzolungiswa ngawo ipulazi lakwa-Khwashakhwasha ukuze libe yisigodlo sikaNdlunkulu weSilo ukaMafu.
“Sekukaningi kwenzeka ukuthi uma abantu sebehluleka wukuphendula imibuzo okumele bayiphendule bese becasha ngegama lami noma ngeNdlunkulu. Akukhona okokuqala sizwa abantu bethi bacela imali kuhulumeni ukuze balungise izigodlo.
Siyamangala ukuthi yiziphi lezi zigodlo nokuthi kanti akupheli yini ukulungiswa kwazo. Akuzwakali kahle ukuthi minyaka yonke kukhulunywe into eyodwa yokulungiswa kwezigodlo, lokhu kufaka iNdlunkulu naye uhulumeni uqobo ehlazweni,” kugcizelela Isilo.
Sithe lokhu okwenzekile kufakazela izinsolo nezikhalo ekade iNdlunkulu yayizibeka kubo bonke oNdunakulu kusuka ngo-1994 kuze kube yimanje. Phakathi kwezikhalo nezinsolo ezikhona kubikwa nokuthi abantu abasebenza eMnyangweni we-Royal Household abanawo amakhono anele nolwazi lokuphatha lo Mnyango.
Kuningi iNdlunkulu ekuphakamisile ukulungisa lesi simo. Phakathi kwakho wukuthi kwenziwe uphenyo ngokuthi bonke abasebenzi kulo Mnyango bahola kufanele yini nokuthi umuntu unalo yini ikhono noma amaphepha okwenza umsebenzi awuqashelwe.
Sithe abantu bazomangala ukuzwa ukuthi yonke le mali okuthiwa ihlale inikezwa sona empeleni iphelela kubasebenzi ayizi kusona uqobo.
Isilo sibuye sathi siyalamukela ilungelo lesiShayamthetho lokucubungula nokufuna ulwazi ngemali kahulumeni okuyinto eyenziwa ngamalungu esiShayamthetho kepha saphakamisa ukuthi amalungu angakwenza kangcono lokho uma engase akhulume ngento ayaziyo nayibonile.
Okhulumela iNdlunkulu umntwana uMbonisi Zulu ukuqinisekisile ukuthi uzohola ithimba labantwana emhlanganweni noNgidi ukuzozwa uvo lwakhe kulolu daba. Uphinde wakuqinisekisa futhi ukuthi incwadi yesimemo eqondiswe kuSomlomo uNkk Peggy Nkonyeni nayo ithunyelwe, kumenywa ngokuse-mthethweni isiShayamthetho ukuba sizozibonela izigodlo.